3-Sababood Oo U Sahlaysa Ra’iisul Wasaare Kheyrre In Uu Ka Aarsado Wasiir Juxa (Sheeko Xasaasi Ah) | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA 3-Sababood Oo U Sahlaysa Ra’iisul Wasaare Kheyrre In Uu Ka Aarsado...
3-Sababood Oo U Sahlaysa Ra’iisul Wasaare Kheyrre In Uu Ka Aarsado Wasiir Juxa (Sheeko Xasaasi Ah)
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Mr Juxa ayaa lix bilood jirsaday markii xilkan loo magacaabay isaga iyo xeyn kale oo golaha wasiirrada Kheyrre.
Ninnba Hawl karnimadiisa iyo qofba waxqabad xummadiisa; wuxuu safka hore kaga jiraa Juxa wasiirrada la filayo in ay qaaddo seefta isku shaandheynta ah ee Kheyrre la filayo in uu dhawaan sameeyo.
Haddaba waxaan dib u millicsaneynaa saddex waxyaabood oo sabab u ah in uu xilkiisa wasiirnimo waayo Mudane Juxa oo musuq maasuq badan lagu eedeeyay.
1:- Xiriirka Kala Dhaxeeya Kheyrre: waa hubanti qof walba oo xiriir wanaagsan la leh ra&apos;iisul wasaaaraha wuxuu hubaa in uu soo noqonayo, halka qaar kale oo kamid ah wasiirrada ay waxqabadkooda kusoo noqonayaan, sidaa darteeda labada dhinacba wuu kudhacay Juxa, maadaama uusan lahayn waxqabad lagu xillan karo, sidoo kalena uusan xiriir wanagsan kala dhaxeyn Kheyrre; marka aan intaas isku geyno xisaabta waxaa soo baxaysa in Uu kursigiisa wayn doono Wasiirka Arrimaha gudaha Soomaaliya mudane Juxa.
2:- Arrintii Xoghayihii Joogtada: intii uu shaqada wasaaradda joogay waxaa soo wajahday mid kamid ah mushkiladihii siyaasadeed ee dalka, markii ay isku dhaceen xoghayihii joogtada wasaaraddaas mudane Yaxye Ibraahim kaas oo xigto iyo xigaal ay yihiin Kheyrre.
waa sabab kale oo uu kuwayn karo xilkaan, maadaana uu goaankiisa ku adkeystay markii uu arrinta soo dhex galay Kheyrre; raiisul wasaaraha ayaa u arka in ay tahay meesha keliya ee uu kaga aarsan karo Juxa marka isku shaandheynta la sameeyo.
3:-Waxqabad Xumo: hawlihii loo igmaday ee ay kamid ahayd federaaleynta dalka iyo dob u heshiisiinta Galmudug iyo Ahlu sunnah dhammaan wuu gacan maran yahay tan iyo maalinkii loo dhiibay shaqadaas.
Si kastaba ha ahaatee ma jirto sabab kale oo uu Kheyrre ugu xisho Juxa in uu sii ahaado xafiiska maadaama uu ku dhacay dhammaan waxyaabaha aan kor kusoo xusnay.